मेरो माइक्रोफाइनान्सको खुद नाफा ७७ प्रतिशतले बढ्यो, अन्य सूचक कस्तो ? – Insurance Khabar
मेरो माइक्रोफाइनान्सको खुद नाफा ७७ प्रतिशतले बढ्यो, अन्य सूचक कस्तो ?
प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०७६, मंगलवार १०:१४
मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ को चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ । लघुवित्तले आर्थिक वर्ष २०७५ /७६ को १२ महिनामा १६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्तले ९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा लघुवित्तको नाफा ७७ प्रतिशतले बढी हो ।